Hordhaca buugga dhexdhexaadnimada islaamka
Mahadda Alle ayay u sugan tahay, oo ah rabiga koonka. Naxariis iyo nabadgelyanna ha ahaato midka ugu sharafta badan rususha oo ah sayidkeena Muxamed, iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii dhamaantood.
Ilaahay waxuu ina amray in aynu qaadano wixii Nebi Muxamed (Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee) inoola yimid kana tagno wixii nebigu inaga reebay. Waxaanu ilaahay yiri:
)وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((1)
(Wixii uu rasuulku idiinla yimid qaata, wixii uu idiinka reebayna ka taga oo ka waantooba)
Waxaana la ogsoon yahay in sunadda nebiga ee suubani ay fasirtay oo caddaysay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa. Sidoo kale waxa ay sunadda nebigu caddaysay wax kaste oo dadku ugu baahan yihiin liibaantooda ifka iyo aakhiro ba. Waxayna sunnadu ku lehayd kaalin sal u dhigidda dhexdhexaadnimada iyo ku toosnaanta.
waxaan ku caddeeyay warqadahan kaalintan muhiimka ah ee xagga caqiidada iyo cibaadada, iyo sida ay u noqotay dibacsanaanta sharciyaynta islaamka waddo oo ay dadku ku gali jireen Diinta Islaamka iyagoo koox koox ah, iyo sida ay dhedhexaadnimada saameyn weyn uga qaadatay horumarkii dacwada Islaamka iyo faafinteedi xikmada iyo wanaaggu ku salaysan.
Ilaahay baynu waydiisanaynaa in uu ina waafajiyo dhamaanteen wixii khayrka diinteena, adduunyaddeena iyo umaddeenuba ku jiro. Ilaahay baana iska leh waafajinta. Eabe naxariis iyo nabad gelyo nebi Maxamed, dushiisa ha yeelo iyo dhamaan ehelkiisa iyo asaxaabitiisaba.
Pro.Axmed Cumar Haashim
(1) Al-xashr 7
Read 490 times	Last modified on Friday, 26 February 2016 09:54
More in this category: « Tusmaha buugga dhexdhexaadnimada islaamka Qeexidda Dhexdhexaadnimada »
The role of mosques in preservation of arabic languages and hausa culture